“Akkamiin addaan baafanna?” Oromoo – Kichuu
HomeAfaan OromooNews“Akkamiin addaan baafanna?” Oromoo
“Akkamiin addaan baafanna?” Oromoo
Dhimmootni ajjeechaan wal qabatanii uummata keenya Oromoo irratti guyyaa guyyaan adeemaa jiran gaaffii hedduu dhalanii jiru. Gaaffileen deebi dhaban kunneen ammoo akka uummatni ammallee ija hubatnaan dhaggeeffatu taasisaa jiru.
Gaaffiiwwan kunneenis qaama garaagaraan ka’aa jiru. Qaamoleen gaaffii dhimma ajjeechaa kanaan wal qabatee sammuu isaaniitti uumame fala barbaaddota hedduun isaanii. Qaamoleen gaaffii dhimma ajjeechaan walqabsiisee gaafatan; Qaama Mootummaa kanaan kan Oromooti jedhee amanee fi qaama mootummaan kun isuma kaleessaati jedhudha.
Qaamoleen lamaan olii warri mootummaan kan Oromooti jedhu keessaa kanneen sammuu qulqulluu ta’een yaadaniif kanneen ilaalcha OPDO tiin yaadantu jiru. Isaan lamaan kana keessaa jechuun qaama mootummaan kana Oromooti jedhan warreen sammuu qulqulluun itti fakkaatee kan Oromooti jedhu uummatni isaanii Oromoo ajjeefamuu hinbarbaadan. Gaddaaf gadadoo saba isaanii kana dhaga’uus arguus warra hinfeenedha. Isaan gaaffii qabanis warreen kana.
Warri mootummaan kun sirna Oromoo ajjeesu kaleessaati jedhanis qaama lamatu jiru. Isaan Dimokiraasii haqaatti amananiif isaan Walabummaatti amanan warra Oromoo bilisoomsee Oromiyaa walaboomte arguu barbaadudha.
Egaan caasaalee gurguddoo lamaa fi caasaa muraasa arfan olii keessaa gaaffii kan qabu qaama sadiidha. Qaama Mootummaatti sammuu qulqulluun amanee fi qaamolee lamaan mootummaan kun hinjijjiiramne jedhanii amananidha jechuudha.
Gaaffilee isaaniitti gaafa dabarru, jalqaba namootni jechoota miidiyaa fi nama dhuunfaa dhugaa se’anii mootummaa Oromooti jedhan dhimma ajjeechaa kana irratti gaaffii
1. Dhuguma Waraanni mootummaa nama ajjeesaa jiraay har’as? Dhuguma mootummaan siyyaasaaf nama hidhaa jiraay har’as? Dhuguma qabeenya uummataa gubaa kan jiru kun waraanuma mootummaatii?
2. Mootummaan kunis Oromoo ni ajjeesamoo? Oromoo nii hidhaa siyyaasaaf? Oromoo duraa maqaa ABO tiin qabeenya nii barbadeessaa?
3. Mootummaan kun dhuguma ABO jibbamoo? Adda Bilisummaa Oromoo balleessuuf dhuguma hojjetaa jiraa?
Gaaffilee jedhaniif kaan of gaafataa jira. Deebii kanaa bira gahuufis waan miijanaa/madaalaa jiru qaba tuutni kun
Kan itti aanu caasaalee lamaan sirnichi isuma kaleessaati hinjijjiiramne jedhan, kanneen Dimokiraasii haqaatti amananii fi Kanneen Walabummaaf Bilisummaa saba isaaniitti amananidha. Isaan kun ammoo gaaffii isaan dhimma ajjeechaa adeemaa jiru ilaalchisee qaban
A. Caasaan mootummaa fi waraanni mootummaa quba wal qabaay?
B. Hogganaan Mootummaa waan inni miidiyaadhaan dubbatuu fi waan waraanni hojjetu wal hinargu isaanumtuu waldhabdee qabuuy?
C. Mootummaan kun amma ajjeechaaf dararaa roorroo hamaa uummata irraan gahaa jiru kanan gatii haammachuuf jedhu herreegeeraa? Gatii inni uummata baasisaa jiru dachaa akka isa kaffalchisu waan beeke qabaay?
D. Mootummaan jaalalaaf aantummaa sabaa hinagarsiifne akka jiraachuu hindandeenye hinbeekuuy? Waraanni isaa itti yaadee isa balleessaa jiraay laata? Kan jedhaniif kaan wal gaafata.
Walumaa gala dubbiin ajjeechaa uummata Oromoo irratti adeemaa jiruu gaaffilee olii sammuu Oromoo keessatti dhalchee jira. Uummatnis har’a “akkamiin adda baafanna” jechaa jira. Gaaffilee kanaaf martuu yeroo yeroodhaan arguuf dhaga’uun mirkaneeffataa nii adeema. Gaafa gaaffileen kun deebii argatan Oromoon murtii dhumaa irra nii gaha jedheen amana
Innifannoon uummata Oromoof
Funyee Show | Waamicha Oromummaa Galma Barkumeetti – Waloo Lataa Qana’iitiin
ARARAMANII NAANNOO SOMALI FI OROMIYA KANA MOTUMMOONI NAANNOO LAMANI HASAWA JIRAN KUN KANA SOBATI HUBADHA Rajjii Motummaa Naannoo Oromiyaa UUmmani Oromoitif Ummaani Somale waliti Araramee jedhee Oddessaa Ture Garuu Gaafa Guyyaa 26/2019 Goodina Shawaa Baaha Magalaa Maata haraa Aana Faanttalee Keessaati Amharii Intaalaa Oromoo loon egaa jirtiitu Ajjessaan Akkasumma Guyyaa 28/8/2019 Oromiyaa baha Goodinaa harargee lixaa Aana Mi’eessoo Keessaati Bakka Barreddaa jedhamatuti Lola Daqqiqaa 25 demme irraati Liyuu hayliin somale Mucaa Oromoo Tokko Ajjeftee Qaabenyaa Uummata Oromoo Sammatee Biyyaa isaniti debitee mee ilala Gaa OPDO akka Ummani oromoo ofa irraa diina hin Eynee Oromoo fi Somaleen waliti Araramate jirtii jedhe yeroo Uummani keenyaa Of Daagatan Akka Liyuu hayliin somale lola Oromoo irraati Laabsaan Goodhani Uummata keenyaa ajjesisaa jiran Garuu Motummaan Naannoo Oromiyaa Media Isaniti Kijjibaa Oddessa jira
የኦሮሞ እና ሶማሌ ህዝቦች አንድነትን የማጠናከር አላማ አለው የተባለ የህዝብ ለህዝብ መድረክ ከትናንት ጀምሮ በጅግጅጋ ከተማ በመካሄድ ላይ ይገኛል። ከሁለቱ ህዝቦች የተውጣጡ ባለስልጣናት፣ አባ ገዳዎች፣ ታዋቂ አርቲስቶች መድረኩን ታድመዋል ። pic.twitter.com/Yci7MFpSBb
— DW Amharic (@dw_amharic) August 4, 2019
: #Somali-#Oromo Reconciliation Conference Kicks Off In #Jigjiga https://t.co/FU3Ub2mDkt On May 1, 2019, The first phase of the Somali-Oromo People-To-People Conference held In #Adama City hosted by Oromia regional state.
via @twitter @Horndiplomat
— Addis Standard (@addisstandard) August 4, 2019
Heera Mootummaa Federaalaawa Dimokiraataawa Ripaabliika Itoophiyaa Osoo Hin Cabsin haalli ADP n Finfinnee itti bulchu gonkumaa hin jiru.